Zvigadzirwa Fekitori | China Zvigadzirwa Vagadziri, Vatengesi
P&Q zvigadzirwa zvakajairwa
Mamiriro ekunze Zviratidzo Chiedza / Vandal-Chiratidzo Chiedza
Mamiriro ekunze Zviratidzo Chiedza / Vandal-Chiratidzo Chiedza Slim
Yangu Conveyor Uye Platform Chiedza
Industrial bulkhead mwenje
Die kukanda aruminiyamu siringi mwenje
Akatungamirira Street Light
Kufa uchikanda bulkhead
yangu yekufambisa mwenje
Vandal chiratidzo mwenje
Kufa kwekukanda inzira inoshanda uye ine hupfumi yekugadzira. Iyo inoshandiswa kugadzira geometrically yakaoma simbi zvikamu izvo zvinoumbwa neyakagadziriswazve mafuru, anonzi anofa. Izvi zvinofa zvinowanzopa hupenyu hwakareba hwebasa, uye ivo vanokwanisa kugadzira zvinhu zvinooneka zvinoyevedza.
Iyo yekufa yekukanda maitiro inosanganisira kushandiswa kwevira, simbi yakanyungudutswa, dhizaini yekukanda muchina uye die iyo yakave yakagadzirirwa-yakagadzirirwa kuti chikamu chikandwe. Iyo simbi inonyungudika mukati mevira uyezve iyo yekufa ichikanda muchina inopinza iyo simbi mune iyo inofa.
P & Q haina epurasitiki jekiseni fekitori, asi inogona zvakare kupa iyo jira simbi zvikamu zvinoenderana nevatengi zvinodiwa. P & Q epurasitiki jekiseni zvikamu, zvidiki kusvika muhombe saizi, kunyanya mukuvhenekesa uye mumugwagwa fenicha kunyorera.
P & Q haina jira simbi fekitori, asi inogona zvakare kupa iyo simbi simbi zvikamu zvinoenderana nevatengi zvinodiwa. Diki kune yakakura saizi, kunyanya mukuvhenekesa uye mumugwagwa fenicha kunyorera.
Gungano rezvakapedzwa zvigadzirwa uye semi-apedza zvigadzirwa
P&Q yaive nefekitori yegungano iri muHaining, Zhejiang, China. Kwete isingasviki 6000 m2.
Iyo yekugadzira inoshanda mu ISO9001 yemhando yepamusoro. Uye hofisi nefekitori yakachengetedzwa muE ERP system kubvira 2019.
Akatungamira Street Light-PQSL003
Simba: 80W, 150W
Chigadzirwa Chigadzirwa (mm):
2. CREE machipisi> 100lm / w
3. 3000-6500K CRI: Ra> 75
4. Kufa uchikanda aruminiyamu 5. Hupenyu:> 50,000hrs
Kufa uchikanda aruminiyamu bulkhead mwenje
1. 9w, 12w, 18w, 24w. 95295 × 83
2. Samsung 5630 yakatungamira> 95lm / w
3.3000 -6500K CRI: Ra> 80
4.die kukanda aluminium + chena PC diffuser:
6.Ava Available basa: Switch, Emergency
Iyo yedu IP65, IK10, bulkhead yakanaka kune huwandu hwemukati nekunze kunyorera. Idzo dzimba dzakagadzirwa zvizere muno muChina dzichishandisa mhando yepamusoro polycarbonate uye kufa-kukanda aruminiyamu.
Bulkhead / EM Bulkhead LED Mwenje
Kuita kwepamusoro, kuita mabasa akasiyana siyana, retrofit inoenderana LED bulkhead mwenje Bulkhead ndeye yakakwira mashandiro uye mwenje weindasitiri mwenje wakave wakanyatsogadzirwa nemhinduro kubva kuvashandi vekumigodhi kuchengetedza kuitira nyore kuiswa kwechiedza chakasimba uye chisingaperi.
● Kuisirwa nyore ● Yese gomo dhizaini
● Yakakwira IP uye yekukanganisa ratings ● Inowanikwa mune smart EM modhi
Iyo yekutanga, yakatendeseka kwazvo, munda-yakaratidza conveyor mwenje.
Freelander yakagadzirirwa kupa yakanyanya simba-inoshanda nzira yekuvhenekesa maindasitiri ekufambisa uye nzira, inokwanisa kuendesa yakadikanwa madiki emakumi matatu emagetsi neavhareji ye80 lux painoparadzaniswa kusvika pamamirimita gumi nemaviri neyakajairwa kumisikidza kureba kwe2.7m uye 5-degree kurereka. Kusimudza bhar yekuita uye kugona kweindasitiri inoshambadzira uye yekufamba mwenje.
Iyo yakasimba unibody dhizaini iri yakapusa uye isingachinjiki pamwe nekuchinjika kukodzera akawanda maindasitiri-akajairwa spigot makomo kuisa. Inesarudzo mukati-yakavakirwa masikati sensor ichaita otomatiki switching pakati pehusiku nehusiku modes kudzikira zvakanyanya simba rekushandisa. Zvakare inowanikwa muWildlife / Turtle Shamwari Amber.
Kufa uchikanda muviri, Hummer Slim LED PRO Yakasimba yeUSD mamiriro ekunze emwenje anovhenekera ngura kana nzvimbo dzakakombama.
Yakagadzirwa uye yakaunganidzwa Hummer yakashata mamiriro ekunze ane nhoroondo yakaratidza uye yakavimbika yekuve yakaoma kumatunhu ese eindasitiri nenzvimbo dzeruzhinji kusanganisira zvivakwa zvekutakura, zvikoro, indasitiri inorema, nenzvimbo dzakakwirira dzekuparadza. Iyo giya rekudzora rakagadzirwazve kuti riitwe nyore, rakanyanya-kushanda, uye rinoshandisirana neLumen Select Technology,
Kufa kukanda muviri, Hummer LED PRORobust LED yekudzivirira mamiriro ekunze luminaire kumira ngura kana kupaza nzvimbo dzakajairika.
ZveTekinoroji kana mushure-kutengesa
address:Kwete. 11 Kuvaka, No. 8 Haining Avenue, HAINING, JIAXING, 314400 China
P & Q Chiedza